လူတစ်ယောက်အတွက် ဘယ်အချိန်ဟာ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးလဲ ? – Trend.com.mm
Posted on December 6, 2018 by Wint
ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ဆိုတာ တမင်လုပ်ယူရတာမျိုးလား? လူတစ်ယောက်အတွက် ဘယ်လိုအချိန်ဟာ
ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးလဲ ? မင်းထင်ထားတာထက် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ပုံစံဆိုတာ အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သိပံ္ပပညာရှင်များရဲ့လေ့လာမှုအရ ဥာဏ်ရည်ကောင်းမွန်ခြင်းဟာ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးလို့ သိရပါတယ်။
ဦးနှောက်ဟာ ရှုပ်ထွေးတဲ့ အစိတ်ပိုင်းတွေဆက်စပ်ထားတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဦးနှောက်ပြေးမှုက အခြားလူတွေရဲ့အမြင်မှာ အထင်ကြီးစရာလည်းဖြစ်သလို အလိုလိုကို ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတာပါ။
သူစိတ်ဝင်စားတဲ့ အရာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဗဟုသုတတွေကို သိကျွမ်းနေတာဟာ အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိစေပါတယ်။ ကိုယ်က အေးဆေးအလုပ်လုပ် ၊ ကိုယ့်ပုံစံအတိုင်းနေနေပေမယ့် အလိုလိုနေရင်း အခြားလူအမြင်မှာကြည့်ကောင်းနေတာ ရှိနိုင်သလို ၊ ကြည့်မရတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် လေ့လာမှုတစ်ခုမှာ IQ မြင့်မားသူတွေဟာ အိပ်ရာထက်က လိင်မှုကိစ္စတွေမှာလည်း
အောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလူတွေဟာ နည်းနည်းတော့ အပျင်းကြီးပါတယ်။ အကျင့်ဆိုးလေးတွေလည်း ရှိနေတတ်ပါတယ်။ လူတိုင်းမှာတော့ အကျင့်ဆိုးဆိုတာရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေ.. ဆွဲဆောင်မှုဆိုတာ တမင်လုပ်ယူတာမျိုးမဟုတ်ပဲ သူ့အလိုလို နေရင်းထိုင်ရင်းဆွဲဆောင်မှုရှိနေတာမျိုးလေးပါ။